Nea Enti a Onyankopɔn De Yesu Mae sɛ Agyede (1 Korintofo 15) | Bɛn
1, 2. Ɔkwan bɛn so na Bible kyerɛkyerɛ tebea a adesamma wom no mu, na dɛn ne ɔkwan koro pɛ a yɛbɛfa so afi mu?
“ABƆDE nyinaa penepene, na ɛko awo.” (Romafo 8:22) Ɔsomafo Paulo kaa saa nsɛm yi de kyerɛkyerɛɛ tebea a ɛyɛ awerɛhow a yɛwom no mu. Nnipa ani so no, ɛte sɛ nea amanehunu, bɔne, ne owu ano aduru biara nni hɔ. Nanso, Yehowa nni nnipa sintɔ ahorow no bi. (Numeri 23:19) Onyankopɔn a obu atɛntrenee no ama yɛn ɔkwan a yɛbɛfa so afi yɛn amanehunu mu. Wɔfrɛ no agyede.
2 Agyede no ne akyɛde a ɛsen biara a Yehowa de ama adesamma. Ɛbɛma wɔatumi agye yɛn afi bɔne ne owu mu. (Efesofo 1:7) Ɛne ade a yegyina so nya daa nkwa ho anidaso, sɛ́ ɛyɛ ɔsoro anaa paradise wɔ asase so. (Luka 23:43; Yohane 3:16; 1 Petro 1:4) Nanso, dɛn ne agyede? Ɔkwan bɛn so na ɛkyerɛkyerɛ yɛn Yehowa atɛntrenee a ɛkyɛn so no ho ade?
Nea Ɛyɛe a Agyede Ho Behiae
3. (a) Dɛn nti na agyede no bɛyɛɛ ade a ɛho hia? (b) Dɛn nti na na Onyankopɔn ntumi nyi owu afobu mfi Adam asefo so kɛkɛ?
3 Adam bɔne nti na agyede no ho behiae. Agyapade a Adam nam Onyankopɔn so asoɔden a ɔyɛe so de gyaw n’asefo ne ɔyare, awerɛhow, ɛyaw, ne owu. (Genesis 2:17; Romafo 8:20) Ná Onyankopɔn ntumi mfi nkate mu nsakra owu afobu no kɛkɛ. Ná saa a ɔbɛyɛ no bɛkyerɛ sɛ obu n’ani gu n’ankasa mmara so: “Bɔne so akatua ne owu.” (Romafo 6:23) Na sɛ Yehowa sɛee n’ankasa atɛntrenee ho gyinapɛn a, anka basabasayɛ ne amumɔyɛ bɛkɔ so wɔ amansan yi mu!
4, 5. (a) Ɔkwan bɛn so na Satan twirii Onyankopɔn, na dɛn nti na na ɛsɛ sɛ Yehowa bua saa mpoatwa no? (b) Sobo bɛn na Satan bɔɔ Yehowa asomfo anokwafo?
4 Sɛnea yehui wɔ Ti 12 no, atuatew a ɛkɔɔ so wɔ Eden no maa nsɛmpɔw akɛse sɔree. Satan guu Onyankopɔn din pa no ho fĩ. Ɔnam saayɛ so bɔɔ Yehowa sobo sɛ ɔyɛ ɔtorofo ne katabaakofo a ne tirim yɛ den a ɔde ahofadi kame n’abɔde. (Genesis 3:1-5) Satan nam sɛe a ɛte sɛ nea ɔsɛee Onyankopɔn atirimpɔw a ɛne sɛ ɔde nnipa treneefo bɛhyɛ asase so ma no so nso kyerɛe sɛ Onyankopɔn adi nkogu. (Genesis 1:28; Yesaia 55:10, 11) Sɛ Yehowa ammua saa mpoatwa yi a, anka n’abɔde a wonim nyansa no mu pii betumi ahwere ahotoso a wɔwɔ wɔ ne nniso mu no pii.
5 Satan twirii Yehowa asomfo anokwafo nso, bɔɔ wɔn sobo sɛ pɛsɛmenkominya adwene na wɔde som Onyankopɔn, na sɛ wɔkɔ ahokyere mu a, wɔn mu biara renkɔ so nsom No. (Hiob 1:9-11) Na saa nsɛmpɔw yi ho hia koraa sen ahokyere a nnipa wom no. Yehowa tee nka sɛ ɛfata sɛ obua Satan sobo a ɛyɛ ntwiri no. Nanso, na ɔkwan bɛn so na Onyankopɔn betumi afa asiesie nsɛmpɔw yi na wagye adesamma nso?
6. Nsɛm a wɔde di dwuma wɔ Bible mu de kyerɛkyerɛ ɔkwan a Onyankopɔn nam so gyee adesamma mu no bi ne dɛn?
6 Ná mmɔborohunu a ɛso bi nni na ɛteɛ yiye wɔ ɔkwan a Yehowa bɛfa so adi ho dwuma no mu—nea na nnipa biara ntumi nnya ho adwene da. Nanso, na ɛyɛ tiawa koraa. Wɔka ho asɛm akwan pii so sɛ ogye, mpata, adetɔ, ne mpatade. (Dwom 49:8; Daniel 9:24; Galatifo 3:13; Kolosefo 1:20; Hebrifo 2:17) Nanso, ebia nea ɛkyerɛkyerɛ asɛm no mu sen biara ne nea Yesu ankasa de dii dwuma no. Ɔkae sɛ: “Onipa ba no amma sɛ wɔnsom no, na ɔbɛsomee, na ɔde ne kra ayɛ agyede [Hela, lyʹtron] ama nnipa pii.”—Mateo 20:28.
7, 8. (a) Wɔ Kyerɛwnsɛm no mu no, dɛn na asɛm “agyede” kyerɛ? (b) Ɔkwan bɛn so na nsɛso fa agyede ho?
7 Dɛn ne agyede? Hela asɛmfua a wɔde dii dwuma wɔ ha no fi adeyɛ asɛm bi a ɛkyerɛ “sɛ wobegyae obi, wobeyi obi” mu. Wɔde asɛm yi dii dwuma de kyerɛkyerɛɛ sika a wotua de gye nkurɔfo a wɔafa wɔn nnommum wɔ ɔko mu no mu. Ɛnde, na yebetumi akyerɛkyerɛ agyede mu sɛ biribi a wotua de gye biribi. Wɔ Hebri Kyerɛwnsɛm no mu no, asɛmfua a egyina hɔ ma “agyede” (koʹpher) no fi adeyɛ asɛm a ɛkyerɛ “kata so” mu. Sɛ nhwɛso no, Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ ɔmfa mannɔ ‘ntetare’ (ɛte sɛ “kata” no ara) adaka no mu ne ɛho na ensisiw ntokuru no. (Genesis 6:14) Eyi boa yɛn ma yehu sɛ sɛ́ wɔbɛma agyede no kyerɛ nso sɛ wɔbɛkata bɔne so.—Dwom 65:3.
8 Sɛnea ɛfata no, Theological Dictionary of the New Testament ka sɛ asɛmfua yi (koʹpher) “kyerɛ nsɛso bere nyinaa,” anaa biribi a ɛne biribi hyia. Enti, na apam adaka no mmuaso yɛbea ne adaka no ankasa di nsɛ. Saa ara na nea ɛbɛyɛ na wɔagye obi afi bɔne mu, anaa wɔakata ne bɔne so no, na ɛsɛ sɛ wotua biribi a ɛne no di nsɛ koraa, anaa ɛkata adesɛe a bɔne no de bae no so koraa. Enti Onyankopɔn Mmara a ɔde maa Israel no kae sɛ: “Ɔkra nsi ɔkra ananmu, aniwa nsi aniwa ananmu, ɛse nsi ɛse ananmu, nsa nsi nsa ananmu, ɛnan nsi ɛnan ananmu.”—Deuteronomium 19:21.
9. Dɛn nti na gyidifo no de mmoa bɔɔ afɔre, na ɔkwan bɛn so na Yehowa buu afɔre a ɛtete saa no?
9 Efi Habel bere so reba no, gyidifo a wɔtraa ase no de mmoa bɔɔ afɔre maa Onyankopɔn. Wɔnam saa a wɔyɛe no so daa no adi sɛ wonim bɔne ne hia a wohia ogye, na wɔkyerɛɛ Onyankopɔn bɔhyɛ a ɛfa ogye a ɛnam ‘n’aseni’ so bɛba ho no mu gyidi. (Genesis 3:15; 4:1-4; Leviticus 17:11; Hebrifo 11:4) Yehowa ani sɔɔ afɔre a ɛtete saa no, na ɔmaa saa asomfo yi nyaa n’anim dom. Nanso, na mmoa afɔre ahorow yi yɛ sɛnkyerɛnne kɛkɛ. Na mmoa ntumi nkata nnipa bɔne so ankasa, efisɛ wɔmmɛn nnipa baabiara. (Dwom 8:4-8) Enti, Bible ka sɛ: “Anantwinini ne mpapo mogya ntumi nyi bɔne.” (Hebrifo 10:1-4) Na afɔre a ɛtete saa no yɛ agyede afɔre ankasa a na ɛrebɛba no ho mfonini anaa sɛnkyerɛnne kɛkɛ.
‘Agyede a Ɛfata’
10. (a) Hena na na ɛsɛ sɛ ogyefo no ne no kari pɛ, na dɛn ntia? (b) Dɛn nti na na ehia sɛ wɔde onipa biako pɛ na ɛbɔ afɔre?
10 Ɔsomafo Paulo kae sɛ: “Wɔn nyinaa wu Adam mu.” (1 Korintofo 15:22) Enti na ɛsɛ sɛ agyede no fa obi a ɔyɛ pɛ te sɛ Adam—onipa a ɔyɛ pɛ—wu ho. (Romafo 5:14) Abɔde foforo biara nni hɔ a na obetumi ama atɛntrenee nsenia no akari pɛ. Onipa a ɔyɛ pɛ, obi a onni Adam wu afobu ase—obi a ɔyɛ Adam sɛso pɛpɛɛpɛ—na na obetumi de ‘agyede a ɛfata’ no ama. (1 Timoteo 2:6) Na enhia sɛ wɔde nnipa ɔpepem pii a wɔn dodow nni ano bɔ afɔre na ama ayɛ afɔre a ɛfata ma Adam aseni biara. Ɔsomafo Paulo kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: ‘Ɛnam onipa biako, Adam, so na bɔne baa wiase.’ (Romafo 5:12) Na “sɛnea ɛnam onipa so na owu bae no,” saa ara na Onyankopɔn “nam onipa so” de nkwagye brɛɛ adesamma. (1 Korintofo 15:21) Ɔkwan bɛn so?
‘Agyede a ɛfata ma nnipa nyinaa’
11. (a) Ɔkwan bɛn so na na ogyefo no ‘bɛka owu ahwɛ ama onipa biara nipa’? (b) Dɛn nti na na Adam ne Hawa ntumi nnya agyede no so mfaso? (Hwɛ ase hɔ asɛm no.)
11 Yehowa yɛɛ nhyehyɛe maa onipa a ɔyɛ pɛ fii ne pɛ mu de ne nkwa bɔɔ afɔre. Sɛnea Romafo 6:23 kyerɛ no, “bɔne so akatua ne owu.” Bere a ogyefo no de ne nkwa rebɔ afɔre no na ‘ɔbɛka owu ahwɛ ama onipa biara nipa.’ Ɔkwan foforo so no, na obetua Adam bɔne no ho ka. (Hebrifo 2:9; 2 Korintofo 5:21; 1 Petro 2:24) Na mmara ho nsɛm a emu yɛ den wɔ eyi mu. Sɛ woyi Adam asoɔden ho wu afobu no fi n’asefo so a, na agyede no beyi bɔne tumi a ɛsɛe ade no afi hɔ koraa. *—Romafo 5:16.
12. Kyerɛkyerɛ sɛnea ɛka biako a wotua so betumi aba nnipa pii mfaso no mu.
12 Mfatoho bi ni: Fa no sɛ wote kurow bi a emufo dodow no ara yɛ adwuma wɔ adwinnan kɛse bi mu mu. Wotua mo ka yiye wɔ adwuma no mu, na mo ho tɔ mo wɔ asetra mu. Ɛkɔ so saa kosi da a adwumakuw no to adwinnan no mu. Dɛn ntia? Adwinnan no sohwɛfo dii sika ma adwumakuw no bɔɔ ka buruburoo. Mpofirim ara wo ne w’afipamfo nni adwuma yɛ ma enti, muntumi ntua mo ho aka. Onipa biako no sikadi nti, mo aware mu ahokafo, mo mma, ne wɔn a mode wɔn aka hu amane. So ano aduru bi wɔ hɔ? Yiw! Ɔdefo yamyefo bi de ne ho gye asɛm no mu. Ohu mfaso a ɛwɔ adwumakuw no so. Ɔte nka nso ma emu adwumayɛfo pii no ne wɔn mmusua. Enti ɔyɛ nhyehyɛe sɛ obetua adwumakuw no ka no, na wasan abue adwinnan no. Ɛka biako a otua no de ahotɔ brɛ adwumayɛfo pii, wɔn mmusua ne wɔn a wɔde wɔn aka no. Saa ara na Adam ka a wotuae no de mfaso brɛɛ nnipa ɔpepem pii a wɔn dodow nni ano.
Hena na Ɔde Agyede no Ma?
13, 14. (a) Ɔkwan bɛn so na Yehowa de agyede no maa adesamma? (b) Hena na wotuaa agyede no maa no, na dɛn nti na na ɛho hia sɛ wotua biribi a ɛte saa?
13 Yehowa nkutoo na na obetumi de ‘oguammaa a oyi wiase bɔne kɔ no’ ama. (Yohane 1:29) Nanso, ɛnyɛ ɔbɔfo biara kɛkɛ na Onyankopɔn somaa no sɛ ommegye adesamma. Mmom no, ɔsomaa Nea obetumi de mmuae a etwa asɛm no so koraa ama Satan wɔ sobo a wabɔ Yehowa asomfo no ho no. Yiw, Yehowa somaa ne Ba a ɔwoo no koro, ‘nea ɔyɛ n’adɔde’ no ma ɔbɛbɔɔ afɔre a ɛsen biara. (Mmebusɛm 8:30) Onyankopɔn Ba no fii ne pɛ mu ‘yii’ ne soro nipasu “guu hɔ.” (Filipifo 2:7) Anwonwakwan so no, Yehowa yii N’abakan a ɔwɔ soro no nkwa ne ne nipasu bɛhyɛɛ Yudani baabun bi a ne din de Maria awotwaa mu. (Luka 1:27, 35) Sɛ́ onipa no, na wɔbɛfrɛ no Yesu. Nanso, wɔ mmara kwan so no, na wobetumi afrɛ no Adam a ɔto so abien, efisɛ na ɔyɛ Adam sɛso pɛpɛɛpɛ. (1 Korintofo 15:45, 47) Enti na Yesu betumi de ne ho ama sɛ agyede afɔre ama adesamma abɔnefo.
14 Hena na na wobetua saa agyede no ama no? Dwom 49:7 ka no pefee sɛ, wotuaa agyede no ‘maa Onyankopɔn.’ Na so ɛnyɛ Yehowa na ɔyɛɛ agyede no ho nhyehyɛe? Ɛyɛ ɔno, nanso eyi mma agyede no nyɛ adeyɛ a ntease nnim anaa mfaso nni so—te sɛ obi yi sika fi ne kotoku biako mu de hyɛ foforo mu. Ɛsɛ sɛ yehu sɛ agyede no nyɛ honam fam ade a wɔde di nsesa na mmom mmara kwan so adeyɛ. Yehowa nam agyede a otuae a ɛmaa ɔno ankasa huu amane pii no so sii di a odi n’ankasa atɛntrenee a ɛyɛ pɛ so pintinn no so dua.—Genesis 22:7, 8, 11-13; Hebrifo 11:17; Yakobo 1:17.
15. Dɛn nti na na ɛho hia sɛ Yesu hu amane na owu?
15 Wɔ afe 33 Y.B. mu no, Yesu Kristo fii ne pɛ mu penee ayayade a wɔde yɛɛ no a ekowiee agyede no tua no so. Ɔma wɔkyeree no bɔɔ no atoro sobo, buu no fɔ, na wɔbɔɔ no fam dua ho kum no. So na ɛho hia sɛ Yesu hu amane pii saa? Yiw, efisɛ na ɛsɛ sɛ wosiesie Onyankopɔn asomfo mudi mu kura ho ɔsɛmpɔw no. Sɛnea ɛfata no, Onyankopɔn amma Herode ankum akokoaa Yesu. (Mateo 2:13-18) Nanso, bere a Yesu yɛɛ ɔpanyin no, otumi gyinaa Satan ntua a emu yɛ den ano a na ɔte nea ɛrekɔ so no nyinaa ase. * Yesu nam kɔ a ɔkɔɔ so yɛɛ obi a “ne ho tew, onni bɔne, ne ho nni nkekae” ɛmfa ho ayayade a ɛyɛ hu a wɔde yɛɛ no no so daa no adi ma ɛyɛɛ nwonwa koraa sɛ Yehowa wɔ asomfo a wɔkɔ so di nokware wɔ sɔhwɛ mu. (Hebrifo 7:26) Ɛnde, ɛnyɛ nwonwa sɛ aka kakra ma Yesu awu no, ɔteɛɛm nkonimdi so sɛ: “Wɔawie!”—Yohane 19:30.
Ne Nkwagye Adwuma no a Owiei
16, 17. (a) Ɔkwan bɛn so na Yesu kɔɔ so yɛɛ ne nkwagye adwuma no? (b) Dɛn nti na na ɛho hia sɛ Yesu ‘koyi ne ho adi Onyankopɔn anim ma yɛn’?
16 Nanso, na Yesu nnya nwiee ne nkwagye adwuma no. Wɔ Yesu wu akyi nnansa no, Yehowa nyanee no fii awufo mu. (Asomafo no Nnwuma 3:15; 10:40) Ɛnyɛ Yehowa Ba no som adwuma a ɔyɛɛ no nokwaredi mu no ho akatua nko na Yehowa nam adeyɛ a ɛho hia yi so de mae, na mmom ɔma onyaa hokwan wiee ne nkwagye adwuma no sɛ Onyankopɔn Sɔfo Panyin nso. (Romafo 1:4; 1 Korintofo 15:3-8) Ɔsomafo Paulo kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: ‘Kristo a ɔbae sɛ sɔfo panyin no nnam mpapo ne anantwi mma mogya so, na mmom n’ankasa ne mogya so na ɔnam kɔɔ kronkron mu prɛko konyaa daa ogye. Na Kristo anhyɛn kronkronbea a wɔde nsa yɛe a ɛyɛ kronkronbea ankasa no ho sɛnkyerɛnne no mu, na mmom ɔhyɛn ɔsoro ankasa sɛ afei okoyi ne ho adi Onyankopɔn anim ama yɛn.’—Hebrifo 9:11, 12, 24.
17 Ná Kristo ntumi mfa ne mogya ankasa nkɔ soro. (1 Korintofo 15:50) Mmom no, ɔde nea mogya no yɛɛ ho sɛnkyerɛnne no na ɛkɔe: ne desani nkwa a ɛyɛ pɛ a ɔde bɔɔ afɔre mmara kwan so no bo a ɛsom no. Afei, ɔde saa nkwa no bo a ɛsom no kɔɔ Onyankopɔn anim sɛ ade a ɔde regye adesamma abɔnefo. So Yehowa gyee saa afɔrebɔ no toom? Yiw, na eyi bɛdaa adi wɔ Pentekoste afe 33 Y.B., bere a wohwiee honhom kronkron guu asuafo bɛyɛ 120 so wɔ Yerusalem no. (Asomafo no Nnwuma 2:1-4) Ɛwom sɛ na ɛno yɛ anigye de, nanso afei na na agyede no so mfaso a ɛyɛ anigye no afi ase reda adi.
Agyede no So Mfaso Horow
18, 19. (a) Nnipakuw abien bɛn na wonyaa mpata a ɛnam Kristo mogya so bae no so mfaso? (b) “Nnipakuw kɛse” no fam no, agyede no so mfaso a wɔrenya no mprempren ne nea wobenya daakye no bi ne dɛn?
18 Wɔ Paulo krataa a ɔde kɔmaa Kolosefo no mu no, ɔkyerɛkyerɛɛ mu sɛ ɛsɔɔ Onyankopɔn ani sɛ ɔbɛfa Kristo so apata Ɔno ne nneɛma nyinaa ntam, sɛ ɔnam Yesu mogya a wohwie gui wɔ asɛndua no so so bɛma asomdwoe aba ɔne wɔn ntam. Paulo kyerɛkyerɛɛ mu nso sɛ saa mpata yi fa kuw abien a ɛsono emu biara ho, “nea ɛwɔ ɔsoro” ne “nea ɛwɔ asase so.” (Kolosefo 1:19, 20; Efesofo 1:10) Kristofo 144,000 a wɔama wɔn anidaso sɛ wɔbɛsom sɛ asɔfo wɔ soro, na wɔne Kristo Yesu adi asase so sɛ ahemfo no na wɔwɔ saa kuw a edi kan no mu. (Adiyisɛm 5:9, 10; 7:4; 14:1-3) Wɔnam wɔn so de agyede no so mfaso bedi adesamma asoɔmmerɛfo ho dwuma nkakrankakra wɔ mfirihyia apem no mu.—1 Korintofo 15:24-26; Adiyisɛm 20:6; 21:3, 4.
19 “Nea ɛwɔ asase so” no ne wɔn a wɔhwɛ kwan sɛ wobenya asetra a ɛyɛ pɛ wɔ Paradise wɔ asase so no. Adiyisɛm 7:9-17 ka wɔn ho asɛm sɛ “nnipakuw kɛse” a wobenya wɔn ti adidi mu wɔ “ahohia kɛse” a ɛreba no mu no. Nanso, ɛnsɛ sɛ wɔtwɛn kosi saa bere no ansa na wɔanya agyede no so mfaso horow. “Wɔahohoro wɔn ntade ama ahoa oguammaa no mogya no mu” dedaw. Esiane sɛ wɔwɔ agyede no mu gyidi nti, wɔrenya saa ɔdɔ nsiesiei no mu mfaso wɔ honhom fam mprempren mpo. Wɔabu wɔn treneefo sɛ Onyankopɔn nnamfo! (Yakobo 2:23) Esiane Yesu afɔrebɔ no nti, wotumi de ‘nnam kɔ ɔdom ahengua no anim.’ (Hebrifo 4:14-16) Sɛ wɔyɛ bɔne a, wonya fafiri ankasa. (Efesofo 1:7) Ɛmfa ho sɛ wɔnyɛ pɛ no, wɔwɔ ahonim pa. (Hebrifo 9:9; 10:22; 1 Petro 3:21) Enti pata a wɔapata wɔne Onyankopɔn ntam no nyɛ biribi a wɔrehwɛ kwan, na mmom ɛyɛ ade a ɛwɔ hɔ mprempren! (2 Korintofo 5:19, 20) Wɔ Mfirihyia apem no mu no, wɔde nkakrankakra “bɛfa wɔn ho adi afi ɔsom a ɛsom porɔwee no mu,” na awiei koraa no, ‘wɔbɛkɔ Onyankopɔn mma anuonyam adehyedi mu.’—Romafo 8:21.
20. Ɔkwan bɛn so na agyede no a yɛasusuw ho no aka wo ankasa?
20 “Aseda mfa yɛn Awurade Yesu Kristo so nka Onyankopɔn” wɔ agyede no ho! (Romafo 7:25) Agyede no yɛ nnyinasosɛm a asete nyɛ den, nanso ɛyɛ ade a emu dɔ ma ɛyɛ yɛn nwonwa. (Romafo 11:33) Na sɛ yɛde anisɔ susuw agyede no ho a, ɛka yɛn koma, na ɛtwe yɛn bɛn atɛntrenee Nyankopɔn no kɛse. Te sɛ odwontofo no, yɛwɔ biribiara a yebegyina so ayi Yehowa ayɛ sɛ ‘ɔdɔ asɛntrenee ne atɛntrenee.’—Dwom 33:5.
^ nky. 11 Ná Adam ne Hawa ntumi nnya agyede no so mfaso. Ɛdefa obi a ɔhyɛ da di awu ho no, Mose Mmara no de nnyinasosɛm yi mae sɛ: “Munnnye owudifo a odi fɔ sɛ wakum onipa bi no hɔ biribi mmfa nnnye no nkwa.” (Numeri 35:31) Ɛda adi sɛ, na ɛfata sɛ Adam ne Hawa wu, efisɛ wofi wɔn pɛ mu na wɔhyɛɛ da yɛɛ Onyankopɔn so asoɔden. Wɔnam saayɛ so hweree daa nkwa ho anidaso a na wɔwɔ no.
^ nky. 15 Nea ɛbɛyɛ na Yesu asesa Adam bɔne no, na ɛsɛ sɛ owu sɛ ɔbarima a ɔyɛ pɛ, na ɛnyɛ sɛ abofra a ɔyɛ pɛ. Kae sɛ, na Adam bɔne no yɛ boapayɛ, ɔyɛe a na onim aniberesɛm a ɛwɔ adeyɛ no mu ne nea ebefi mu aba no nyinaa. Enti nea ɛbɛyɛ na Yesu abɛyɛ “Adam a odi akyiri” na wakata bɔne so no, na ɛsɛ sɛ ofi ahokokwaw mu paw sɛ ɔbɛkɔ so akura ne mudi mu ama Yehowa. (1 Korintofo 15:45, 47) Enti nokware a Yesu dii wɔ asetram no nyinaa—a n’afɔrebɔ wu ka ho—dii dwuma sɛ ‘trenee biako.’—Romafo 5:18, 19.
Numeri 3:39-51 Dɛn nti na ɛho hia sɛ agyede no yɛ nea wɔhweree no nsɛso pɛpɛɛpɛ?
Dwom 49:7, 8 Dɛn nti na yɛde Onyankopɔn ka wɔ agyede no a ɔde ama yɛn no ho?
Yesaia 43:25 Ɔkwan bɛn so na kyerɛwsɛm yi boa yɛn ma yehu sɛ ɛnyɛ nnipa nkwagye ne ade titiriw a enti Yehowa de agyede no mae?
1 Korintofo 6:20 Nkɛntɛnso bɛn na ɛsɛ sɛ agyede no nya wɔ yɛn nneyɛe ne asetra kwan so?